Fijoroana vavolombelona - Dr Adem
Manana finoana matanjaka aho amin'ny fitazonana ny fahamarinan'ny rafi-kery fanefitra amin'ny fahatapahan-tenako hanasitrana ny homamiadan'ny tsinay amin'ny haavony. Taorian'ny fikarohana eran'izao tontolo izao dia nifidy an'i Verita Life Hamburg aho noho ny antony tokana iray: Dr Adem Gunes. Hitako ho tsy manam-paharoa izy amin'ireo Drs rehetra noresahiko. Nohamafisiny fa ny fomba fijeriny dia natao voalohany indrindra sy 'hamono ny homamiadana' - tsy ny fitsaboana mahomby ny fitsaboana. Nandritra ny fifanakalozan-kevitra nataontsika dia nanoritsoritra ny fomba fanalahidy lehibe izy tamin'ny fomba izay tena nahaliana ahy. Ny tena zava-dehibe dia tsy nanao siramamy izy. Nanoro hevitra izy fa na dia eo aza ny fitsaboana dia mifototra amin'ny zava-maniry, dia hisy fiatraikany. Nefa azo tanterahina izany. Ny fitsaboana azoko tany am-boalohany tamin'ny taona dia avy amin'ny klinika Meksikana lafo vidy, ary niverina izany. Telo herinandro taorian'ny niverenako tany Aostralia dia nirohotra nankany amin'ny sampana vonjy maika aho. Ny fandinihan'ny CT iray dia nanambara fa ny iray amin'ireo havako lehibe dia nitombo be, tampoka teo amin'ny voa. Ny fanarahana ny PET-CT dia nanambara fitomboana bebe kokoa. Noho izany, na dia natoky an'i Dr Gunes aza aho, dia mbola feno fanahiana ihany aho noho ny zavatra niainako tany Meksika. Tonga tany Hamburg aho rehefa avy nanidina nandritra ny 26 ora, nahatsiaro malemy sy nitebiteby. Sarotra ny fitsaboana nandritra ny enim-bolana saingy noho ny fananganana fitokisana isan'andro, tsapako fa nanomboka tamin'ny fomba tsara ny vatako. Modern ny klinika ary ny mpiasa dia mahafinaritra, mahay sy be fiahiana. Ary ny fitsaboana dia 'tena' -ny fanontaniana rehetra izay nanontaniako ny fanafody samy hafa na fanafody na fanafody miorina amin'ny zavamaniry dia na valin'ny siantifika; na nanadihady. Ny zava-dehibe dia ny fitiliana ra dia nalaina isaky ny andro na isaky ny andro faharoa mba hamaritana ny fomba namalian'ny vatanao ny fitsaboana; ary raha afaka mikarakara fitsaboana fanampiny ny vatanao. Ireo marary tsaboina ao amin'ny toeram-pitsaboana dia avy amin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao - ny sasany manana kansera mafy sy tsy afaka mandeha na miresaka. Tena nahagaga ny fijerin'izy ireo ny fivoaran'izy ireo mandritra ny fitsaboana. Taorian'ny fitsaboana enim-bolana dia tsy azoko atao hoe nalahelo ny nandao ny ririnina Hamburg aho ary niverina tany Aostralia masoandro. Dimy herinandro taorian'izay dia nisy ny famandrihana PET-CT ary fantatro fa ny roa tamin'ny fivontosako dia nihena 60%; ary ny fivontosan'ny havokavoko dia lasa necrotic. Manerana ny birao, mihena ny fivontosana rehetra amin'ny SUV amin'ny salan'ny 20% amin'ny ambaratonga mitovy, izay milaza fa nisy ny famaliana tampoka - araka ny nohamafisin'i Dr Gunes. Ny hany tokana kely hiverenako any Aostralia dia ny tsy ahitako an'i Dr Gunes na mandray ny fitsaboana eto. Faly aho miresaka amin'ny olona momba ny zavatra niainako.
Anne Reeve, 57 taona, AostraliaColon Cancer
Ny mampiavaka manokana an'i Dr. Gunes dia ny fahalalany sy ny traikefany amin'ny hoe famenon-tsakafo, amin'ny fanafody marika, fitsaboana simika ary hyperthermia rehetra dia miara-miasa miaraka amin'ny rafi-kery fanefitra ary mampihena kansera. Mahatakatra ny rafitry ny fitsaboana samihafa izy, izay manome ny marary azy hanana ny fiainana tsara indrindra. Natohina tamin'ny fivontosan'ny atidoha tampoka tamin'ny taonjato farany aho tamin'ny taona 2017. Ny fikarohana nataoko momba ny Fitsaboana Integrative dia nahatonga ahy handeha amin'ny fiaramanidina ary nankany amin'ny firenena hafa hihaona sy hiara-miasa amin'ny dokotera manan-talenta manokana, i Dr. Adem Gunes. Rehefa avy nanatri-maso ny fomba fitaizam-pahaizany tamina fikarakarana marary, natao tamin'ny traikefa be dia be sy ny fikarohana momba ny fitsaboana amin'ny homamiadana, ary koa ny fanajany sy ny fiheverany ny mahasoa ny tsirairay sy ny olona tsirairay, dia nanamafy fa nandray fanapahan-kevitra tsara aho. Nahafinaritra ny Dr. Gunes nanampy ahy hifindra tany amin'ny ekipa mpitsabo any Etazonia, raha nanohy nitarika ny protocole ho fikarakarana ahy izy. Toa mamirapiratra ny hoaviko. Andriamanitra hitahy anao Dr Gunes sy ny ekipanao. Izaho sy ny fianakaviako dia velom-pankasitrahana mandrakizay.
Mike Lane, 55 taona, EtazoniaKanseran'ny atidoha
Efa nandinika ny Hodgkins Lymphoma aho, Stage 3, Aogositra 2018. Taorian'ny tsipika faha-3 tamin'ny fitsaboana Chemo tany Malta, dia mbola navitra ny Lymphoma nataoko. Nomena laharana faha-4 sy farany an'i Chemo aho ary tsy nanaiky aho noho ny voka-dratsin'ny poizina vokatry. Nanapa-kevitra aho fa hanomboka fitsaboana miaraka amin'i Dr. Adem, ary tao anatin'ny 6 herinandro fotsiny ny fitsaboana malefaka miaraka amin'ny ekipa mahavariana indrindra, nihena 80 isan-jatony ny havokavoko ary nahazo lanja sy nahatsiaro tena salama kokoa noho ny nanomboka. Dr Adem, tena tiako ny hisaotra anao amin'ny zava-drehetra, ny ekipa ary ny traikefa nahafinaritra. Asa lehibe ho an'izay rehetra voakasik'izany ary ankoatra ny fitsaboana ny serivisy ho an'ny marary dia tena tsara.
Kurt Spiteri, 30 taona, MaltaHymgoma's Hodgkin
Rehefa voan'ny homamiadana ny rahavaviko izay mipetraka any Irlandy, dia te hahita ny fitsaboana tsara indrindra azo alaina izahay, ary isaorana ny Dr Adem Gunes, nahita ny klinika tsara indrindra ho azy isika. Nandinika ny tatitra ara-pitsaboana ny Dr. Adem ary nanao tolo-kevitra ho an'ny fitsaboana mifameno ary nanolotra tobim-pitsaboana. Nahazo fikarakarana tsara ny rahavaviko ary niditra tao anaty famerenenan-drà ny fivontosany ary ankehitriny dia tsy misy lalan'ny fivontosana. Mody an-trano izao izy amin'ny karazan-tsakafo fanampiny sy sakafo mahitsy. Nifandray tamin'ny fitsaboana nandritra ny fitsaboana ny rahavaviko ny Dr. Adem ary nanampy tamin'ny torohevitra sy torohevitra. Hanoro hevitra ny Dr. Adem aho amin'izay rehetra fantatro fa voan'ny homamiadana.
Les SerffMallorca, Espaina
Nihazakazaka nanonona ny anaran'ny dokotera Adem aho, niaraka tamin'ny fahalalany ny protocols homamiadana isan-karazany, fa miaraka amin'ny fahalalana fanampiny izay azony tamin'ny fandalinana manan-danja amin'ny fanafody hohanina sy ny fiantraikany amin'ny homamiadana. Rehefa nahazo ny lisitry ny protocole aho lisitra, dia tsapako fa ny Dr. Adem dia eo amin'ny sisin'ny fitsaboana amin'ny homamiadana.
Tsy hisalasala ny hanolotra ny serivisy nataon'i Dr Adem aho satria nomeny fanantenana be dia be izahay amin'izao fotoana mampisavoritaka izao. ”
Ny zavatra niainako dia ny Dr. Adem Gunes dia manolotra serivisy sarobidy maro izay tsy manana mpividy fotsiny. Ny fitadiavana vahaolana amin'ny homamiadana dia sarotra amin'ny ambaratonga maro, ary angamba ny olana lehibe indrindra dia ny filàna haingam-pandeha sy ny marina amin'ny fitadiavana foibe fitsaboana sahaza.
Rehefa avy nihaona tamin'ny Standard Medical Oncologist izahay ary nanadihady tsara ny fahombiazana rehetra, ary ny tsy fahombiazan'ny fitsaboana simika sy taratra, dia fantatray fa ny fitsaboana Alternative kankana ihany no anay. Nahita ny Dr Adem Gunes izahay.
JP & MPHUNTINGTON BEACH, Etazonia
Tena nanampy ahy ilay nahazo ny hevitr'i Dr. Adem. Nandalina momba ny fitsaboana homamiadana hafa aho fa tsy nahalala izay hofidina. Ary nanondro ahy fotsiny izy amin'ny lalana mety